ထပ် လုပ်ပေး ဦးနော် – Grab Love Story
ထပ် လုပ်ပေး ဦးနော်
ရွှေဝင်းတစ်ယောက် လူငယ်ပီပီအပေါ်ထပ်အနောက်ခန်းထဲရှိ ခုတင်ပေါ်တွင် ခေါင်းချလိုက်သည်နှင့်တုံးကနဲ အိပ်ပျော်သွားပါတော့၏။ တစ်နာရီလောက်အကြာတွင် အောက်ထပ်က တကျွိကျွိ လှုပ်ရှားသံတွေကြောင့်ေ၇ွှဝင်းဖျတ်ကနဲ နိုးလာသည်။ ရွှေဝင်းက…..အိပ်ပျော်လွယ်သလောက် အလွန်အအိပ်စက်သူဖြစ်၏။ အောက်ထပ်အခန်းနှင့်အပေါ်ထပ်ရှိ သူ့အခန်းမှာ တဆက်တည်းဖြစ်နေ၍ လှုပ်ရှားသံတွေကလည်း တဆက်တည်းလိုဖြစ်နေသည်။ ရွှေဝင်းအသံမကြားရအောင် ခုတင်ပေါ်က အသာအယာဆင်းလိုက်သည်။သူ့အခန်းမှာ မီးမှောင်နေသဖြင့် အောက်ထပ်အခန်းထဲရှိ မီးရောင်က လက်တစ်လုံးခန့် ပေါက်နေသော ကြမ်းပြင်ကို အရောင်ဟပ်နေသည်။ ထိုအပေါက်မှ အောက်ထပ်အခန်းဆီသို့ အသာလေးချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ဦးထွန်းမောင်နှင့် အဒေါ် မတင်သောင်းတို့…အဝတ်အစားကင်းကွာ ဗလာကိုယ်တုံးလုံးကြီးဖြင့် လိုးနေကြသည်ကို မီးရောင်အောက်တွင် အထင်းသားကြီး မြင်တွေ့ရသည်။အပေါ်ထပ်နှင့် အောက်ထပ်အကွာအဝေးမှာ (၇)ပေလောက် ကျော်ကျော်မျှသာရှိသဖြင့် မြင်ရသော မြင်ကွင်းမှာ ဝေးလှသည်မဟုတ်။ ထို့အပြင်….ဘတ္ထရီဖန်ချောင်း မီးဖြစ်သဖြင့် အလင်းရောင်က လင်းထိန်နေသည်။
မတင်သောင်းလက်နှစ်ဖက်က ဘေးသို့ဆန့်ချထားပြီး မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ ခံနေသည်။အသက်အရွယ်ကြောင့်လားမသိ ဦးထွန်းမောင် လိုးနေပုံက အားမာန်သိပ်မပါလှ။ မကြာခင်မှာပင် ဦးထွန်းမောင် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲတုန်လှုပ်ကာ ဖင်ကြောကြီးတွေ ရှုံ့ရှုံ့ခွက်သွားပြီး ဆောင့်နေသော အရှိန်များလည်း ရပ်တန့်သွားသည်။ မတင်သောင်းကမူ ဒူးထောင်ပေါင်ကား ပက်လက်အနေအထားဖြင့် စောစောက အတိုင်းပင် ငြိမ်သက်နေသည်…။ ရွှေဝင်းတစ်ယောက် အပေါ်ထပ်ချောင်းကြည့်ရင်း….လီးတွေတောင် နေသည်။ အမှန်အားဖြင့် သူ့ဦးလေးမိန်းမ အဒေါ မတင်သောင်းမှာ သွေးသား ဆူဖြိုး ကာမအားတွေတိုးကောင်းနေဆဲအရွယ်ဖြစ်သည်။အခုမှအသက်(၃၈)နှစ်မျှသာ ရှိသေးသည်ဖြစ်ရာ ထန်လို့သန်လို့ အကောင်းဆုံး အရွယ်ဖြစ်၏။ထိုသို့ဖြစ်ပါလျှက်……..မတင်သောင်း တုန့်ပြန်ချက်တွေက အပေးအယူ မမျှဘဲ အေးစက်စက် အနေအထားဖြစ်နေသည်။ ဦးထွန်းမောင်တစ်ယောက် မတင်သောင်းကိုယ်လုံးပေါ်တွင် မှောက်ထပ် ထားရာမှ ကုန်းထလိုက်ပြီး မတင်သောင်းဘေးတွင် ယှဉ်အိပ်လိုက်သည်။ ပေါင်ကြားရှိ လီးတန်ကြီးအရှည်မှာ ငါးလက်မခန့်သာရှိပြီး ပျော့ခွေနေသည်။ တောင်လျှင် အဘယ်မျှရှည်သည်မသိ။ယခုပျော့ခွေနေသော အနေအထားမှာ ငါးလက်မခန့်သာရှိရာ ရွှေဝင်းလီးထက်ပင်သေးနေပါသေးသည်။
ရွှေဝင်းလီးတန်မှာ အရှည် (၇)လက်မ..။အတုတ်က (၆)လက်မခန့်ရှိသည်။ လီးချင်းယှဉ်ရိုက်လျှင် ရွှေဝင်းလီးက အပြတ်အသတ်နိုင်မှာသေချာ၏။ ပေါင်တံဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးတွေက ရွှေဝင်းစိတ်ကို လှိုင်းထလှုပ်ရှားစေသည်။ မတင်သောင်း၏ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးကြီးကိုကြည့်ရင်း ရွှေဝင်းပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးမှာ တဆတ်ဆတ်တောင်မတ်လာ၏။တဖြည်းဖြည်း မာကျောတင်းတောင် လာသည်။ ရွှေဝင်းက သူ့လီးတန်ကြီးကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ရင်း ဆက်ကြည့်နေ၏။ အဒေါ်၏ကိုယ်ခန္ဓာအလှမှာ အစွမ်းကုန်ပေါ်လွင်နေပါတော့သည်။နို့ကြီးနှစ်လုံးက တင်းရင်းမို့မောက်ကာ နို့သီးခေါင်းတစ်ဝိုက်မှာ စူဖောင်းနေ၏။ ခါးက အနည်းငယ်တုတ်သယောင်ရှိပြီး…..ဖင်ဆုံကြီးက ပြည့်ဖြိုး ထွားကားလှသည်။ ဆီးခုံကြီးက စင်းမို့နေပြီး စောက်မွှေးတွေက မဲချိတ်နက်မှောင်နေသည်။
စောက်ဖုတ်ကြီးက သိသိသာသာကို ခုံးကြွနေသည်။စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီး နှစ်လွှာက အညိုရောင်သမ်းနေပြီး အနည်းငယ် ပြဲဟနေသည်။ မတင်သောင်းက ဘယ်ဖက်လက်ဝါးဖြင့် သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးရင်း ညာလက်ဖဝါးကမု ဦးထွန်းမောင်၏ပျော့ခွေနေသော လီးတန်ကြီးကို ဆွပေးနေသည်။ ဆုတ်လိုက်ဖြဲလိုက်၊ဂွင်းတိုက်လိုက်၊လှုပ်ရမ်းလိုက်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဆွပေးနေသည်။သို့သော်….လီးတန်ကြီးက ပျော့ခွေမြဲပျော့ခွေနေသည်။ယခင်က အလွန်အလိုး သန်လှသော ဦးထွန်းမောင်တစ်ယောက် တစ်ချီမျှ လိုးပြီးရုံနှင့်ယခုလို ပျော့ခွေသွား တတ်သည်မှာ မှတ်မှတ်ရရ (၃)လကျော်ပြီ…။ မတင်သောင်းတစ်ယောက် ကာမဆန္ဒပြည့်ဝခါနီးပြီဆိုလျှင် သူ့ယောက်ျား ဦးထွန်းမောင်မှာ သုတ်ရေတွေ ပန်းထွက်ပြီး အရှိန်ကုန်သွားတတ်၏။ စောစောပိုင်းကမူ လီးကြီးက ဆွလိုက်လျှင်ပြန်ထလာတတ်သည်။ယခုနောက်ပိုင်း မထတော့။သို့သော် ထလိုထညားဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် မတင်သောင်းကတော့ ဆွဲပေးမြဲ ဆွပေး၏။ ကြာတော့…..မတင်သောင်း စိတ်ဓာတ်ကျလာသည်။ဆွပေးချင်စိတ်တွေ ကုန်ခမ်းလာသည်။ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကိုဆွပြီး ကိုယ့်လက်နှင့်ပင် ပြီးလိုက်တော့မည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကာဆက်ဆွမပေးတော့….။ တဖြည်းဖြည်းကာမစိတ်တွေထကြွလာသည်။ကာမဇောတွေပြင်းထန်လာသည်။စောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ခလယ်ထိုး၍ ခပ်သွက်သွက်ကလေး အသွင်းအနှုတ်လုပ်သည်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပင့်ထောင်လိုက်ပြီး စိတ်ရှိလက်ရှိ ဆွနေ၏။ ဦးထွန်းမောင်ကမူ….တစ်ဖက်သို့ စောင်းအိပ်ရင်း တခေါခေါနှင့် ဟောက်နေပါတော့၏။ သွေးသားဆူဖြိုးသော မတင်သောင်းမှာ အသက်(၃၈)နှစ်မျှသာရှိသေးရာ ထန်လို့ ထလို့ ကြွလို့ ရွလို့ အကောင်းဆုံး အရွယ်ဖြစ်သည်။
ဦးထွန်းမောင်လည်း ဟန်ဆောင် အိပ်ပျော်နေခြင်းမဟုတ်။စောစောက သူ့မိန်းမကို လိုးဆော်လိုက်ရသဖြင့် တကယ်ပင် မောဟိုက်ကာ အိပ်ပျော်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အဒေါ်စောက်ဖုတ်ကိုမှ ဒီညမလိုးရဘူးဆိုလျှင် ရွှေဝင်းတစ်ယောက် သေလျှင်သေ မသေလျှင် သည်းခြေပျက်ကာ ရူးသွားဖို့သေချာ၏။ ရွှေဝင်းက သူ့လီးတန်ကြီးကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ထားရာမှ လေးငါးချက်ခန့် ခပ်ပြင်းပြင်းဂွင်းတိုက်ထည့်လိုက်သည်။ရာဂစိတ်တွေကပြင်းထန်နေသဖြင့် သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ လှုပ်ရှားသံ ထွက်ပေါ်သွားသည်။ အပေါ်ထပ်က လှုပ်ရှားသံကိုကြားလိုက်ရသော်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာမတင်သောင်းက သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဆက်ဆွနေသည်။ နို့အုံကြီးကိုလည်း အခြေက ဆုတ်ကိုင်ကာ ပွတ်ချေပေးနေ၏။တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တွန့်လိမ်ကော့ပျံနေပါတော့သည်။ ဦးထွန်းမောင်ကမူ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ် တစ်ခေါခေါဟောက်လျက် အိပ်ကောင်းနေပါတော့သည်။ ယခု ရွှေဝင်းရှိနေသော အပေါ်ထပ်အနောက်ခန်းမှာ ယခင်က မတင်သောင်း နေထိုင်ခဲ့သော အခန်းဖြစ်၏။ ယခုသူတို့လင်မယား နေထိုင်ကြသော အောက်ထပ်အခန်းမှာယခင်က သူ့အမေနှင့်အဖေတို့ နေထိုင်ကြသော အခန်းဖြစ်သည်။ အပျိုဖော်ဝင်ကာစ မိန်းကလေးများ ထုံးစံအတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက် ယောကျာ်း အပေါ် စိတ်ဝင်စားလာတတ်သော မတင်သောင်းသည် သူ့အဖေနှင့်အမေတို့၏ ညရေး ညတာကိစ္စများကို သိချင်စိတ်ပြင်းပြလာ၏။ တစ်နေ့ ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်း မြင့်မြင့်ကြည်နှင့် ရေခမ်လမ်းမှာ ဆုံကြသည်။
သက်တူရွယ်တူ ကာမပိုးကြွစ….အရွယ်များဖြစ်ကြ၏။ မြင့်မြင့်ကြည့်မှာ ပထွေးနှင့်နေရသူဖြစ်၏။ပြီးတော့ သူက တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်၏။မြင့်မြင့်ကြည်ကို သူ့ပထွေး ကိုစံတင်က အပေါ်ထပ်အနောက်ခန်းထဲမှာ နေစေသည်။ သူတို့ လင်မယားကတော့ မြင့်မြင့်ကြည် အခန်းနှင့်တည့်တည့် အောက်ထပ် အခန်းထဲမှာ နေကြသည်။ တစ်နေ့ မြင့်မြင့်ကြည် မရှိခိုက် ကိုစံတင်ါပေါ်ထပ်တက်ပြီး…. မြင့်မြင့်ကြည် အခန်းထဲရှိကြမ်းပြင်ကိုစူးနှင့်ဖောက်သည်။ပြီးတော့ ဓားချွန်နှင့် ချဲ့သည်။ လက်မဝက်လောက်ရှိသောအခါ ရပ်လိုက်သည်။ကိုစံတင်က ဤရွာသားမဟုတ်…။(၁၂)ပွဲဈေးသည်လုပ်ခဲ့ဖူးသဖြင့် အတွေ့အကြုံက စုံလှပြီဖြစ်၏။မိန်းမတွေ မှိုလိုပေါက်အောင်ယူခဲ့သည်။ယခု မြင့်မြင့်ကြည် အမေ မလှခင်နှင့်ကျမှ အိမ်ထောင်သက် အတော်ကြာသည်ဟု ပြောနိုင်သည်။ဒါကလည်း အကြောင်းရှိ၏။မလှခင်က လုံးကြီးပေါက်လှ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်….စွဲမက်စရာ ရုပ်ရေရှိ၏။ ထို့အပြင် မြေယာဧကပေါင်းများစွာရှိသည်။
ဘယ်တုန်းကမှ အိမ်ခြေယာခြေ အတည်မရှိခဲ့ဖူးသော ကိုစံတင်တစ်ယောက် ရုပ်ချော ဥစ္စာပေါ မုဆိုးမနှင့်ညားမှ ဏ္ဍနြေ္ဒရသွားတော့သည်။ဒါကလည်း တစ်ချက်….။ မလှခင်မှာ ယခင်ယောက်ျားနှင့်ရထားသော သမီးတစ်ယောက်ရှိ၏။မအေတူ သမီးမို့ ချောချောလှလှဖြူဖြူတုတ်တုတ်ကလေး ဖြစ်သည်။ မအေကိုယ်နှိုက်ကလည်း သွေးသားဆူဖြိုးဆဲ ချောတုန်းတောင့်တုန်း…. လိုးလို့ မဝတုန်းရှိသေး၏။ရိုးအီသွားခဲ့လျှင် နောက်ဆက်လိုးရန် သမီးတစ်ယောက်က အဆင်သင့်ရှိနေ၏။ ကိုစံတင်က အကြမ်းပတမ်းကိုင်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိ။မိန်းမအတွေ့အကြုံ ရှိထားသူပီပီ….သူ့အလိုလိုခံချင်စိတ်တွေ တားမနိုင် ဆီးမရဖြစ်လာစေရန် အကွက်ချစီမံ ထား၏။ထို့အပြင် မယားပါသမီး မြင့်မြင့်ကြည်မှာ ငယ်သေးသည်။ ကိုစံတင်က အရောတဝင်ပွတ်သီးပွတ်သပ်မနေ ခပ်တည်တည် ခပ်မှန်မှန်နေ၏။ထို့ကြောင့် သားအမိနှစ်ယောက်လုံးက လေးစားရိုသေကြသည်။ မိန်းမစွဲအောင်လိုးနိုင်သော ကိုစံတင်ကို မလှခင်ကလည်း အသဲစွဲချစ်နေပါတော့သည်။ အရက်ပုံမှန်သောက်လေ့ရှိသော်လည်း အရက်ကြောင့် ဘာပြဿနာမှ မတက်အောင်နေတတ်၏။အရက်မူး၍ ဆူပူရန်ဖြစ်ခြင်းလုံးဝမရှိ။ ထို့ကြောင့် မလှခင်က ကိုစံတင်အရက်သောက်တာကို လုံးဝငြူစူခြင်းမရှိ။ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်နှင့် သူ့ကို ကောင်းကောင်းလိုးပေးနိုင်ရန် သောက်သည်ဟု ထင်မှတ်နေသည်။
ကိုစံတင်နှင့် ညားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အမျှအတမ်းလည်း မဝေတော့…။ အမှတ်တရ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်း မပြုလုပ်တော့……..။ ဒုတိယလင် ကိုစံတင်နှင့်သာ မရိုးနိုင်သောကာမအရသာကို စိတ်တူကိုယ်တူ စိတ်ကူးရတိုင်း ရမ္မက်မြူးကြွတိုင်း ခံစားလျှက်ရှိနေပါတော့သည်။ မြေဧကပေါင်းများစွာနှင့်ခိုင်းနွား….မွေးနွားတွေကနည်းနည်းနောနောမဟုတ်..။ ကိုစံတင်အရင်းစိုက်ရတာဆိုလို့ သူ့ပေါင်ကြားက လီးတစ်ချောင်းသာဖြစ်သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်အခန်းထဲက ကြမ်းပြင်ကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးသည့်ညက ဖွင့်ပွဲ အဖြစ် လင်မယားနှစ်ယောက် ကြမ်းချင်တိုင်းကြမ်းခဲ့ကြသည်။ မလှခင်မှာ အနေရိုးသော်လည်း တဏှာရာဂအားကြီးသော မိန်းမဖြစ်သည်။ ကုတ်ကမျင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
လီးနှင့်အပြတ်ခံနိုင်သူမဟုတ်…..။ ကိုစံတင်မှာ ကာမကိစ္စအထောက်အကူပြု စားဆေးလိမ်းဆေးတွေရှိ၏။ ရိုးအလှသော မလှခင်ကမူ ဘာမှမသိရှာ။သူ့ဆန္ဒပြည့်ဝအောင် အားရပါးရလိုးပေးတာ ကိုဘဲ အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေရှာ၏။ ထိုညကမလှခင်ကို အရက်တစ်ခွက်တိုက်၏။အရက်ထဲတွင် စိတ်ကြွဆေးမှုံ့ တွေခပ်ထားသည်။ ည (၁၀) နာရီခွဲလောက်တွင် အလုပ်စခန်းစကြ၏။မြင့်မြင့်ကြည် သိုးနေသော အချိန်မို့ ထင်တိုင်းကျဲနေကြသည်။ ခါတိုင်းဆိုလည်း ယခုလိုထင်တိုင်းကျဲခဲ့ကြသော နေ့ရက်တွေ မနည်းလှပါ။ သို့သော်…..ဒီနေ့လို ဆူဆူပူပူဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းတော့မဟုတ်…….။ ကိုစံတင်က အကြံရှိသူပီပီ အပေါ်ထပ်မှာအိပ်နေသော မြင့်မြင့်ကြည် မနိုးနိုးအောင် တမင်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်၏။ အရက်အရှိန်နှင့်ရမ္မက်ကြွဆေးအရှိန်က တရိပ်ရိပ် တက်လာပြီဖြစ်ရာ… မလှခင် တစ်ယောက် အပေါ်ထပ်မှာ ရှိနေသောသမီးကိုတောင်သတိမရတော့…….။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ….။ ကိုစံတင် အလိုးကျွမ်းရုံသာမက ဘာဂျာမှုတ်လည်းကျွမ်းသည်။
ဘာဂျာမှုတ်ဆိုသည်မှာ စောက်ဖုတ်ကိုယက်ခြင်း။စုတ်ခြင်း…မှုတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကိုစံတင်ရော မလှခင်ပါ လိုးတော့မည်ဆိုလျှင် အလွန်အေးသော ဆောင်းရာသီမှအပ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်၍ အားရပါးရ လိုးလေ့ရှိသည်။ ကိုစံတင်က မလှခင်ကို ခုတင်စောင်းမှာ ခြေတွဲလောင်းချထိုင်စေပြီး ပေါင်တံ ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးနှစ်ချောင်းကို ခပ်ကားကားဖြဲကားထားစေသည်။ထို့နောက် ကိုစံတင်က ကြမ်းပြင်ပေါ်ဒူးထောက်လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်နှင့်ဖြဲကာ အရည်လဲ့နေသော အတွင်းသားနုနုလေးတွေကို ပါးစပ်ဖြင့် ရှုးကနဲစုတ်ထည့်လိုက်သည်။ အီးကနဲ အသံကြီးနှင့်အတူ မလှခင်လက်နှစ်ဖက်မှာ နောက်သို့အလိုလို ထောက်မိလျှက်သားဖြစ်သွားပြီး ဖင်ဆုံကြီးကို မြောက်ကြွလျှက် စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကော့ပေးမိလျှက်သားဖြစ်သွား၏။ ကိုစံတင်က စောက်ဖုတ်အတွင်းသား နုနုတွေကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ရင်း လျှာနှင့်ပါ မွှေနှောက်ထိုးကလိပေးသည်။ ကိုစံတင် စောက်ခေါင်းအတွင်း လျှာဖြင့်လှည့်ပတ်မွှေနှောက်ရင်း မလှခင်၏ ဆူဖြိုးထွားကားသောတင်ဆုံသား တင်းတင်းအိအိကြီးကို အားပါးတရဆုတ်ချေပွတ်ဆွ ပေးပြန်၏။
“……ကဲ……မိန်းမ….ဖင်ကုန်းပေးစမ်းကွာ….” မလှခင်တစ်ယောက် ဖီလင်တွေ အရမ်းတက်နေသော်လည်း ကိုစံတင်အလိုကျ ကုတင် ဘောင်တန်းပေါ်လက်ထောက်ပြီးခါးကိုညွတ်လျှက် ဖင်အိုးကြီးကိုစွင့်မြှောက်ပေးထား၏။ “…..ဖျန်း….ဖျန်း…..ဖျန်း…..ဖတ်….ဖတ်……ဖျန်း….” ကိုစံတင်က ဖင်ဆုံထွားထွားပြည့်ပြည့်ကြီးကို တဖျန်းဖျန်းတစ်ဖတ်ဖတ် ရိုက်ပွတ်လျက် သူ့လီးတံကြီးကို စောက်ဖုတ်အဝနှင့်တေ့ကာ တရှိန်ထိုးဆောင့်သွင်းထည့်လိုက်သည်။ “……အင့်….အမေ့……အင့်…..” မလှခင်တစ်ယောက် အင့်ကနဲအသံထွက်ကာ ခါးညွတ်လျှက် ဖင်ဆုံကြီးမြောက်တက် သွားသည်။ကိုစံတင်က လက်နှစ်ဖက်နှင့် မလှခင်ခါးကို ဆုတ်ကိုင်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ဆောင့်လိုးပါတော့သည်။ လိမ်းဆေးအာနိသင်ကြောင့် လီးတန်ကြီးမှာ ထွားကြိုင်းတုတ်ရှည်မာကြောနေ၏။တဏှာ ရာဂကြီးသော မလှခင်သည် ဤကဲ့သို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးပေးသည်ကို အလွန်သဘောကျကျေနပ်လျှက်ရှိသည်။ ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချက်တွေနှင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းကော့ကော့ခံနေပုံမှာ သဲထိတ်ရင်ဖို ကောင်းလွန်းလှသည်။ အချက် (၅၀)ကျော်လောက် ဆောင့်လိုးပြီးသောအခါ ကိုစံတင်က သူ့လီးတန်ကြီးကို ဖြုန်းကနဲဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။ရမ္မက်ဇောတွေပြင်းထန်လျှက် တအားခံကောင်းနေစဉ် ဗြုန်းကနဲလီးတန်ကြီးကျွတ်သွားသဖြင့် ရင်ထဲဟာသွားသည်။ ဘာများလုပ်အုံးမှာပါလိမ့်ဟု မျှော်လင့်စောင့်စားနေစဉ် ကိုစံတင်က ဘာမှ မလှုပ်ရှားသည့်အတွက် မလှခင်ခေါင်းငဲ့ပြီး နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။ ကိုစံတင်က အဝင်ဝတံခါးရှေ့တွင် မတ်တပ်ကြီးစုံရပ်လျှက် သူမကို ပြုံးဖြီးဖြီးကြီး ကြည့်နေသည်။
……ဟွန်း…..မသာကောင်….ဒီကကောင်းနေမှန်းသိလို့ သက်သက်မဲ့ယုတ်တာဟု စိတ်ထဲက ကျိတ်ဆဲရင်း ကိုစံတင်ရှိရာသို့ ဒုန်းပြေးသွားသည်။ ကိုစံတင်ကလည်း ကွေ့ရှောင်ပြေး၏။အခန်းထဲလိုက်တမ်းပြေးတမ်းကစားသလိုဖြစ်ကာ တစ်ဒုန်းဒုန်း ဆူညံနေသည်။ မိမလိုရှိရာမှ ကိုစံတင်က ငုံ့ရှောင်လိုက်ပြီး ဖင်ဆုံထွားထွားကြီးကိုဖျန်းကနဲပုတ်လိုက်။နို့ကြီးကိုဆွဲချေလိုက်နှင့် မထိတထိစသည်။ ဤကဲ့သို့ အောက်ထပ်မှာ တဒုန်းဒုန်းဖြစ်နေစဉ် အပေါ်ထပ်ရှိ မြင့်မြင့်ကြည် လန့်နိုးသွားသည်။သူ့အမေနှင့်ပထွေး သတ်များသတ်နေကြသလားဟု စိတ်ထဲပူ သွားသည်။ကျွတ်နေသော ထဘီကိုဖြစ်သလိုပြင်ဝတ်ရင်း အောက်ထပ်သွားမည်အပြု။ အောက်ထပ်မီးရောင်က သူ့အိပ်ယာ သင်ဖြူးစွန်းကြမ်းပေါက်တွင် လာဟပ်နေ၏။ထို့ကြောင့် ဒူးတုတ်၍ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ဘာမှမသိသော မလှခင်က သတိမထားမိသော်လည်း အကြံသမားကိုစံတင်မှာ အပေါ်ထပ်၏အခြေအနေကို အကဲခတ်နေသည်။ အောက်ထပ်က ဆူညံသံတွေကြောင့် မြင့်မြင့်ကြည် နိုးသွားပြီကို သိလိုက်သည်။.
“……အား…..အား….နာတယ်ဟ…..မိန်းမရ….” “…..သေလိုက်လေ….ဘာလို့ယုတ်တာလဲဟင်….” “…..ဟ….ဘာယုတ်လို့လဲ….” “…..ဒီမယ်….ခံလို့ကောင်းနေတာကို …..ဘာလို့လီးကို ချွတ်ပြစ်ရတာလဲ….” မလှခင်က ပြောလည်းပြော….လီးကြီးကိုလည်း တအားဆောင့်ဆွဲလိုက်ရာ ကိုစံတင် တစ်ယောက်မလှခင်နှင့်ပူးကပ်သွားသည်။မလှခင်က လီးတန်ကြီးကို မလွှတ်ဘဲ ဆွဲဖြဲပြီး ခုတင်ဆီခေါ်သွားသည်။ မလှခင်က ခုတင်ပေါ်ကန့်လန့်ဖြတ်အိပ်လိုက်ပြီးဒူးထောင် ပေါင်ကား ပေးသည်။ပါးစပ်ကလည်း.အင့်….လိုးတော့…..ဒီတခါချွတ်ပြစ်ရင် ဓါးနဲ့ကိုထိုးသတ်ပစ်မှာ….” ဟု ပြောလိုက်သည်။ ကိုစံတင်က ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ရင်ဘတ်ဖက်ဆီ တိုးကပ်ရင်း သူ့လီးတန်ကြီးကို စောက်ဖုတ်အဝတွင် ဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းလိုက်သည်။ မြင့်မြင့်ကြည် ချောင်းကြည့်နေမှန်းသိ၍ တဖြည်းဖြည်းသွင်းပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုစံတင် လီးတံတုတ်တုတ်ကြီးက သူ့အမေစောက်ဖုတ်ထဲ တရစ်ခြင်း ဝင်နေတာကိုကြည့်ရင်း မြင့်မြင့်ကြည် ကြက်သီးတစ်ဖျန်းဖျန်းထသွား၏။စိတ်ထဲမှာ လည်း ဘာလိုလိုဖြစ်နေသည်။ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်လေးမှာလည်း မာတင်းသွားသည်ဟု စိတ်ထဲက ထင်လိုက်မိသည်။ “….အေး…..အဲဒါပဲအေ……..ငါ့အမေနဲ့….ငါ့ပထွေး အဲဒီညက လိုးချက်ကတော့ ပက်ပက်စက်စက်ပါဘဲအေ….” “…..ဒါဖြင့်…..ညဉ်းညတိုင်း ကြည့်တာပေါ့….ဟုတ်လား…”……အင်းပေါ့ဟဲ့…..ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာ…..အဟင်း…..” ယခု သူမကိုယ်တိုင် သူ့အမေနှင့်သူ့အဖေတို့ ညညလိုးကြပုံကို ချောင်းကြည့်ခဲ့ဖူးသော အပေါက်မှာ တူရွှေဝင်းက ချောင်းကြည့်နေပေလိမ့်မည်။ တူဆိုသော်လည်း အရင်းမဟုတ်…..။
ဤကမ္ဘာမြေလောကတွင် မိန်းမယောကျာ်း ဒွန်တွဲ၍ ပေါ်လာကတည်းက လိုးဖို့ခံဖို့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့မဟုတ်ပါလား……..။ မိန်းမပေါင်ကြားတွင် စောက်ဖုတ်ခေါ် အပေါက်ရှိသလို ယောကျာ်း ပေါင်ကြားတွင်လည်း လီးခေါ်သောအချောင်းရှိသည်။ အဒေါ်ဖြစ်သူ ကာမဆန္ဒမပြည့်ဝ၍ တစ်ကိုယ်တည်း နှိုက်ဆွဖြေသိမ့်နေပုံကြီး ကိုကြည့်၍ ရွှေဝင်းလီးကြီးမှာ သံမဏိချောင်းကြီးကဲ့သို့ မာကျော၍ တောင်နေပါသည်။ စောစောက လေးငါးဆယ်ချက်ခန့် ခပ်ပြင်းပြင်းဂွင်းတိုက်ထားသဖြင့် လချောင်းကြီး တစ်ခုလုံး ပူရှိန်းယားကြွနေပါသည်။ ရွှေဝင်းတစ်ယောက် ဆုတောင်းကောင်းခဲ့ပုံရ၏။သူ့ပေါင်ကြားက လီးကြီးမှာ အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် ရှည်လျှားတုတ်ခိုင်လှသည်။ ပြီးတော့ ဂွင်းတိုက်လျှင် တော်တော်နှင့်လရည်ထွက်လေ့မရှိ။သုတ်ကို ကြာရှည်စွာထိန်းထားနိုင်သော ဆေးဝါးမလိုဘဲနှင့်ကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ထိန်းထားနိုင်သည်။ ပေါင်တံဖွေးဖွေး ခြေသလုံးသား ဝင်းဝင်းဖွေးဖွေးကြီးတွေ လူးလွန့်လှုပ်ရှားနေပုံ မှာ အသဲယားစရာကောင်းလွန်းလှသည်။နို့သီးခေါင်းကြီးကလည်း ကာမသွေးတွေ ပြည့်လျှမ်းကာ စူတင်းဝင်းပြောင်နေ၏။ မတင်သောင်းတစ်ယောက် ရမ္မက်ဇောတွေအပြင်းအထန်ကြွ၍ ဤမျှ ဆက်စလူးထနေသည့်တိုင် ဦးထွန်းမောင်တစ်ယောက် တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်ပါ။ တမင်သက်သက်လုပ်နေသလား (သို့မဟုတ်)အသက်မှရှိသေးသလားဟု ထင်မှတ်ရသည်။
ရွှေဝင်းဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ပါ။ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပုဆိုးအကျီင်္တွေကိုအားလုံးချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ရွှေဝင်းတစ်ကိုယ်လုံး ကာမ အမှောင်ဓာတ်က ဖုံးလွှမ်းသွားပြီဖြစ်သည်။ သူ့ညာလက်ဖဝါးထဲ တံတွေးထွေးထည့်လိုက်ပြီး လီးတံကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ အချက်(၂၀)ခန့် ခပ်ပြင်းပြင်းဂွင်းတိုက်သည်။လီးတန်ကြီးမှာ အကြောအပြိုင်းပြိုင်းထ လျက် ပို၍တင်းပြောင်လာသည်။ဒစ်ဆံကြီးမှာလည်း ပေါက်ကွဲထွက်မတတ် တင်းကားလာသည်။ ပြီးတော့ အောက်ထပ်သို့ ဒရောသောပါးဆင်းချလာသည်။ ပြင်းထန်သော ခြေသံများကြောင့် ရွှေဝင်းအောက်ထပ်ဆင်းလာသည်ကို ရိပ်မိ၍ မတင်သောင်း စိတ်ထဲ ပြုံးလိုက်မိသည်။ ရွှေဝင်း အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် လီးကြီးမှန်း မတင်သောင်း သိထားပြီးဖြစ်သည်။တစ်ရက် ဦးထွန်းမောင်က ရွှေဝင်းကို ဗေဒင်သင်ကြားပေနေစဉ် အနောက်ဖက်ရွာက လူနှစ်ယောက် ဦးထွန်းမောင်ကို လာပင့်ကြသည်။အကျိုးအကြောင်း မေးကြည့်သောအခါ ကျေးရွာဥက္ကဌ၏သမီး အောက်လမ်းဆရာအလုပ်ခံရ၍ ကုသပေးရန် လာပင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးထွန်းမောင်က ဗေဒင်သင်ကြားခြင်းကိုရပ်ကာ လှည်းနှင့်လာပင့်သော အနောက်ဖက်ရွာသားများနှင့်ပါသွားသည်။ရွှေဝင်းကိုလည်း ယခုပြထားသော နည်းအတိုင်း သံဒိဋ္ဌပြက္ခဒိန်ကြည့်၍ ဇာတာခွင် ၁၉ မျိုးချထားရန် မှာခဲ့သည်။ ဦးထွန်းမောင် ထွက်သွားပြီးမကြာမှီ ရွှေဝင်းလည်းစာအုပ်များကိုယူဆောင်ကာ အပေါ်ထပ်အနောက်ခန်းထဲဝင်၍ဇာတာခွင်ချနေ၏။ဇာတာခွင် ၁၅ မျိုးချပြီးသောအခါ တအားအိပ်ချင်လာ၍ အခန်းထဲရှိခုတင်ပေါ်တွင် တက်အိပ်လိုက်သည်။နေ့လည် ထမင်းစားချိန်အထိ ဆင်းမလာ၍ မတင်သောင်း ရွှေဝင်းရှိရာ အပေါ်ထပ်တက်လာသည် အခန်းတံခါးဖွင့်လိုက်သောအခါ ခုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်ကားယားကြီး အိပ်ပျော်နေသော ရွှေဝင်းကို တွေ့ရ၏။ ပုဆိုးတွင်းမှ တောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးကိုမြင်လိုက်သောအခါ မတင်သောင်းပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဒုတ်နှင့်အတို့ခံလိုက်ရသော ဂုံညင်းဖားကြီးလို ရမ္မက်မာန်ဖီ၍ ခုံးထလာသည်။လီးတန်ကြီးကိုမမြင်ရသော်လည်း သူ့ယောကျာ်းထက် ၂ ဆ ခန့်ရှည်ကြောင်း ခန့်မှန်းလို့ရသည်။မတင်သောင်း အခန်းတံခါးပြန်စိ၍အသာလေးပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်။
ထိုနေ့မှစ၍ ရွှေဝင်းအပေါ် မရိုးသားစိတ်တွေ ဝင်လာခဲ့သည်။ ကာမရာဂကိလေသာစိတ်က တူဟူသောအသိကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလိုက်ပါတော့သည်။ယခုသူကြိတ်၍ ကြံစည်ခဲ့သမျှ အထမြောက်တော့မည်မို့ မတင်သောင်းတယောက် ရင်တွေတလှပ်လှပ်ခုန်ကာ အဖုတ်အုံကြီးက တဖျပ်ဖျပ် မြူးကြွနေသည်။ ဦးထွန်းမောင် ညည သောက်လေ့ရှိသော နွားနို့ခွက်ထဲသို့ အိပ်ဆေးနှစ်လုံး ခတ်ထားလိုက်သည်။ညညမလိုးခင် နွားနို့တစ်ခွက်သောက်နေကျဖြစ်၏။ရွှေဝင်း ဒီမှာ ညအိပ်ဖြစ်အောင်လည်း မတင်သောင်းပင် အကွက်ဆင်ခဲ့သည်။နေရာတကာ လာဘ်မြင်အကင်းပါးတတ်လွန်းသော ဦးထွန်းမောင်တယောက် ဒီည ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကြီး ခံလိုက်ရတော့သည်။ ရွှေဝင်းတစ်ယောက် အဒေါ်အခန်းထဲမဝင်ခင် အိမ်အပြင်ထွက်၍ သေးပေါက်လိုက်သေးသည်။ပြီးမှတံခါးကို အသေအချာဂျက်ထိုးပိတ်ပြီး အဒေါ်ခန်းဆီလာသည်။စေ့ထားသောတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ရာ မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲလက်ထည့်၍ အသွင်းအနှုတ်လုပ်နေသော မတင်သောင်းတစ်ယောက် ဖျပ်ကနဲ အဝင်တံခါးဆီကြည့်မိသည်။
ရွှေဝင်းပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရသောအခါ ကြက်သီး တဖျင်းဖျင်းထသွား၏။ပေါင်တံ၊ရင်အုပ်၊လက်မောင်း ခြေသလုံး ကြွက်သားတွေက အရွယ်နှင့်မမျှ ကျစ်လျစ်လစ်လစ် ဖုထစ်နေသည်။ပေါင်ကြားကလီးတန်ကြီးက ပုတ်သင်ညိုခေါင်းညိတ်သလို တဆတ်ဆတ်နှင့်တောင်ပြပြီးမတင်သောင်းကို ဖိတ်ခေါ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ရွှေဝင်းက ခုတင်ဆီသို့ ဆဖြည်းဖြည်းချင်းလာနေသည်။လီးကြီးကလည်း တဆတ်ဆတ်နှင့်တောင်နေသည်။မတင်သောင်း ပက်လက်အိပ်နေရာမှ ထထိုင်လိုက်ပြီး ခုတင်စောင်းတွင် ခြေတွဲလောင်းချကာ ပေါင်ကို အနည်းငယ်ဖြဲလျှက် ရွှေဝင်းကို ကြိုဆိုနေ၏။ အနားသို့ရောက်လာသောအခါ ရွှေဝင်းခါးကို လှမ်းဖက်လိုက်သည်။ရွှေဝင်း လီးတံနွေးနွေးကြီးက ဆီးခုံမို့မို့ကြီးကို ဖိထောက်ထား၏။ရွှေဝင်းက မတင်သောင်းပါးကို ဆွဲမော့ပြီး နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်သည်။မတင်သောင်းက သူ့လျှာကိုရွှေဝင်းပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးထည့်ပေးသည်။ရွှေဝင်းကမြှင်း၍စုပ်ပေးသည်။မတင်သောင်းက တွဲလောင်း ချထားသော ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ခုတင်စောင်းပေါ်မတင်လိုက်ပြီး ကိုယ်ကို အနည်းငယ်ပြင်၍ မတ်တောင်နေသော လီးတန်ကြီးကို သူမလက်နှင့်ကိုင်ကာ အဖုတ်ဝကို တေ့ပေးသည်။ ရွှေဝင်းက ဒူးကောက်ကွေးကြားတွင် သူ့လက်နှစ်ဖက်သွင်းပြီး ခါးကို လှမ်းဖက်ကာသူ့ဖင်ကြီးကိုရှေ့သို့တိုးပေးသည်။တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးတိုးဝင်လာ သော လီးတန်ကြီး၏အရသာကို တနင့်တပိုးကြီးခံစားရင်း လက်နှစ်ဖက်က ရွှေဝင်းလည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ထားလိုက်၏။လီးတန်ကြီးမှာ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးတိုးဝင်နေရာ တဝက်လောက်အရောက်တွင် ရွှေဝင်းက ကိုယ်ကို မတ်၍ မတင်သောင်းကို ခုတင်ပေါ်မှ ဆွဲယူလိုက်သည်။
အမှတ်တမဲ့မို့ မတင်သောင်းထိတ်ကနဲ လန့်ဖြန့်သွားပြီး လည်ပင်းကို တင်းနေအောင် ဖက်ထားလိုက်ရသည်။ ပြည့်ဖြိုးထွန်းကားသော ဖင်ဆုံကြီးက အောက်သို့အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားရာ လီးတန်ကြီးကိုအားနှင့်ဆောင့်သွင်း လိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ‘ ဖလွတ်’ ကနဲ အဆုံးထိနစ်ဝင်သွားပါတော့သည်။ကောင်းလိုက်သည် မှာ ခေါင်ခိုက်နေပါတော့သည်။အသက် ၃၈ နှစ်ရှိသည့်တိုင် ကလေးမမွေးဖူးသေးသော စောက်ဖုတ်မို့ အော်ရီဂျင်နယ် စောက်ဖုတ်နှင့်အခြား စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိလွန်းလှသည်။ လီးတန်ကြီးနှင့်ယှဉ်လိုက်လျှင် စောက်ဖုတ်အဝမှာကျဉ်းနေသည်ဖြစ်ရာ ကိုယ်ကိုလှုပ်လိုက်သည့်အခါတိုင်း ဖျင်းကနဲ ဖျင်းကနဲပူရှိန်းအီဆောင့်သွားရသည်။ ရွှေဝင်းက မတင်သောင်းကို ပွေ့ချီရင်းလိုးခဲ့ရာ အိမ်အောက်ထပ်အရှေ့ခန်းရှိ နောက်မှီခုံရှည်များဆီသို့ရောက်လာသည်။ ခုံရှည်နှစ်လုံးအလည်ရှိ စားပွဲခုံပေါ်သို့ မတင်သောင်းကို ပက်လက်ချပေးလိုက်သည်။ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် စားပွဲခုံက အံကျဖစ်ဆိုက်ဖြစ်နေပါတော့သည်။
အပေါ်ယံကြည့်လျှင် အေးဆေးတည်ငြိမ်သလောက်အတွင်းအဇ္ဈတ္တကကာမရမ္မက်အလွန်ကြီးသော မတင်သောင်းမှာ ရွှေဝင်းလီးကြီးနှင့် တွေ့တော့မှ အားရကျေနပ်သွားပါတော့သည်။ စောက်ဖုတ်အုံတစ်ခုလုံး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖြစ်ကာ ပူရှိန်းယားကြွ နေသည်။ထိုစဉ် ရွှေဝင်းကသူ့လီးတန်ကြီးကို တစ်ဝက်ကျော်ကျော်ပြန်နှုတ်၏။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးက လီးတန်ကြီးနှင့်အတူကြွတက်ပါလာ၏။ ရွှေဝင်းက ထိုသို့တဝက်ကျော်ကျော်နှုတ်ထားရင်းကပင် ဘာမှ….မလုပ်သေးဘဲ မတင်သောင်း၏နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုတ်ချေပွတ်ဆွပေး၏။နို့သီးခေါင်းတွေကိုလည်း လှိမ့်ချေပေးသည်။မတင်သောင်းစောက်ခေါင်းထဲမှာလည်း စောက်ရည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်ကာ လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားတတ်လာသည်။
ရွှေဝင်းက ကိုယ်ကိုကုန်း၍ နို့နှစ်လုံးကို စို့ပေးလိုက်၏။မတင်သောင်း နှုတ်ဖျားက….”….အီး….အမလေး….” ဟူသော ရမ္မက်ငြီးသံကြီး ထွက်ပေါ်လာပြီး…. စောက်ဖုတ်ကြီးကို အစွမ်းကုန်ကော့ပေးလိုက်ရာ….တဖျစ်ဖျစ် အသံများထွက်ပေါ်လာပြီး တစ်ဝက်ကျော်ကျော်ထွက်နေသော လီးတံကြီးကို စောက်ဖုတ်ကြီးက အဆုံးထိဝါးမြိုသွားပြန်သည်။ “…..ဒေါ်…ဒေါ်…..ကောင်းလားဟင်….” “…..ရှီး……ကျွတ်….ကျွတ်….အားပါးပါး…….ကောင်းမှကောင်း လိုက်တာ ကွယ်…။ အမလေး….စောက်ဖုတ်ထဲကို ကျဉ်စိမ့်နေတာပဲကွယ်….နာနာလေးစောင့်လိုးပေးတာ ကောင်းတယ်ကွယ်…..အရမ်းကောင်းနေ ပီဟုသော အသံနဲ့အတူ ကာမ ရမက်ဇောများ တက်နေသော မတင်သောင်းတသ်ယောက် အားရပါးရအလိုးခံရင်း ရွှေဝင်း အချက် ၃၀ လောက် မနားတမ်း စောင့်လိုက်ရာ နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူ ပီးချင်ဟူသော ကာမ ပီးမြှောက်မူ အရသာကို ခံစားကျရင်း တင်းကျပ်စွာဖက်ထားလိုက်ကျ သည်.. အဒေါကို သူလစ်ရင် ထပ်လိုးပေးပါဦးနော်….နော်…” “……ဟုတ်…..ဟုတ်ကဲ့…..ပါ…” ရွှေဝင်းပျော်ပီး အသံတွေက လှိုင်းထတုန်အက်နေပါတော့သည်။ပီး….